पोखरा रंगशालामा मेडिकल सेन्टर स्थापना रंगशालामा १२ घण्टा होटलमा २४ सै घण्टा चिकित्सक सहितको मेडिकल सेवा – Online Annapurna
पोखरा रंगशालामा मेडिकल सेन्टर स्थापना रंगशालामा १२ घण्टा होटलमा २४ सै घण्टा चिकित्सक सहितको मेडिकल सेवा
१२ मंसिर २०७६, बिहीबार ११:४२ November 28, 2019 198 Views
दीननाथ बराल पोखरा, १२ मंसीर । १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) अन्तरगत पोखरामा हुने ८ वटा खेलहरुको लागि पोखरा रंगशालामा मेडिकल सेन्टर स्थापना भएको छ । साग लक्षित खेलाडी एवं अफिसियलहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि डा.पदम बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा मेडिकल सेन्टर स्थापना भएको हो ।
पोखरा रंगशालाको बहुउद्धेश्य कबर्डहलमा दैनिक १२ घण्टा (विहान ७ बजे देखि बेलुका ७ बजे ) सम्म फस्र्टएडका सामान देखि फिजियोथेरापि सम्मा सामानहरु उपलब्ध हुने भएको डा.खड्काले बताए । पोखरा रंगशाला भित्र खेल हुने पाँच ठाउँमा फस्र्टएड सहितको मेडिकल टोलीहरु रहने भएको उनले जनाए ।
चिकित्सक सहितको फिजियोथेरापिको टोली मेडिकल सेन्टरमा रहने आवश्यक परेको खण्डमा तत्काल पुग्ने गरी प्रबन्ध मिलाएको मेडिकल संयोजक डा.खड्काले बताए । र्यापिट रेस्पोन्स टिम तैनाथ हुने उनले जनाए । सुरक्षाको तीन अंग नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी वल, नेपाली सेनाको टीम समेत परिचालन हुने डा. खड्काले जनाए ।
होटलमा बस्दा समेत खेलाडी एवं अफिसियलहरुलाई रेखदेख गर्न आफ्नो चौबिसै घण्टा चिकित्सक सहितको मेडिकल टोली हुने संयोजक डा. खड्काले जनाए । विहान, दिउँसो र बेलुका सहित गरी मेडिकलले टोलीले खेलाडी सहितको अफिसियलको टोलीको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने तयारी गरेको उनले जनाए ।
एम्बुलेन्स सेवा तयारी अबस्थामा हुने बताएका डा. खड्काले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मणिपाल शिक्षण अस्पताल सहितका पोखरामा भएका सम्पुर्ण निजी अस्पतालहरुले साग लक्षित आवश्यक पर्ने सेवा प्रदान गर्ने भएको जनाए । पोखराका अस्पिटलहरुमा केही सघन कक्षका केही बेडहरु खाली अबस्थामा राख्न समेत आफुहरुले आव्हान गरिएको उनले जनाए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले समेत सहयोग गर्ने भएको छ ।
सागमा सहभागि भएका खेलाडी एवं अफिसियललाई उपचार गर्न परेको खण्डमा फाष्ट्याकबाट छिटो छरितो उपचार गर्ने व्यबस्था समेत आफुहरुले मिलाएको डा. खड्काले दाबी गरे ।
फिजियोथेरापिस डा. खड्गसिंह गुरुङका अनुसार मेडिकल सेन्टरमा अर्थपेडिक, डेन्टिस, नर्स÷सिएमए, फिजियोथेरापिस, स्टेचर, फस्र्टएड किड्स लगायतका अत्यावश्यक बस्तु सहितको सेवा उपलब्ध हुने छ । यही मंसिर विहिबार देखि २४ गतेसम्म उक्त सेवा मेडिकल सेन्टरमा उपलब्ध हुने भएको उनले जनाए । पोखरा रंगशाला भन्दा बाहिर बिच भलिवल, ट्रायथलन र भारतोलन हुने खेल स्थलमा समेत मेडिकल टोली हुने भएको डा.खड्काले जनाए ।
यसैचिब उक्त मेडिकल सेन्टरको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवि पुनले उद्घाटन गरेका हुन्।
मन्त्रीहरुले फस्र्टएडका सामाग्रि मेडिकल संयोजक डा. खड्कालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। मन्त्रीहरुले पोखरा रंगशालामा हाल निर्माण हुदै गरेका साग लक्षित विभिन्न भौतिक संरचनाको अवलोकन समेत गरेका थिए । पोखरा रंगशाला भित्र महिला तर्फको क्रिकेट र फुटवल हुने भएको छ भने ह्याण्डवल, आर्चरी र व्याडमिन्टन हुने भएको हो ।